Mmiri na Mars: ihe niile mara banyere ya na ọmụmụ ọhụụ | Network Meteorology
Ruo oge ụfọdụ, ọmarala na Mars nwere mmiri n'ime ya. Ihe a na-amaghị bụ ókè mmiri nwere ike inwe n'ezie. Dị ka anyị si mara, Mars bụ ihe NASA lekwasịrị anya ma na-amụ ihe nke ọma. E kpughere data ọhụrụ na mmiri na ala metụtara ala ahịhịa nke dị na ndịda osisi. Ọtụtụ ọdọ mmiri ndị dị n'okpuru ala dị na mpaghara a.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile a maara ugbu a gbasara mmiri na Mars.
1 Ugwu South na mmiri na Mars
2 Nyocha banyere mmiri na Mars
3 Ọcha ọcha
4 Ọnọdụ maka ndụ
Ugwu South na mmiri na Mars
Ruo ugbu a, anyị maara na ala Mars dị n'okpuru ya nwere ihe nchekwa mmiri ice na carbon dioxide oyi kpọnwụrụ na ebe, a na-akpọ akọrọ akọrọ. A na-achọta sedimenti ndị a na ọkwa dị iche iche, nke na-enye anyị ohere ịdekọ akụkọ ihe mere eme nke Mars nke ọma. Ọmụmaatụ, ekwe ka anyị chọpụta otú ụfọdụ n'ógbè Mars na-ajụ oyi n'oge ndị gara aga na-ekwe ka nke a na oyi.
Ihe omumu ohuru nke NASA mere ka ekpughere ndi ozo banyere ihe ndi a. Ha ejighi n'aka ma ọ bụrụ na ihe ịrịba ama ndị a bụ mmiri mmiri, mana ha yiri ka ha buru ibu karịa nke achọtara na akwụkwọ mbụ. Agencylọ ọrụ ahụ ji ọrụ MARSIS mee ihe na mbara igwe European Express Agency nke Mars Express. Site na ngwa radar a, ndị nyocha nwere ike izipu ebili mmiri n’elu Mars. Dabere na ebili mmiri gosipụtara ọ na-enweta, ha nwere ike ikpebi ihe dị n'okpuru ala. Ọmụmaatụ, a na-egosipụta ice dị mfe na ebili mmiri radarebe ihe mejuputara ya dika uwa n’onwe ya n’enweta ngwa ngwa ma ghara iputa ihe.
Nnyocha ọhụrụ emere ekpughere ọtụtụ ihe ntụgharị uche na osisi ndịda. Mpaghara ihe ndị a metụtara buru ibu karịa ka anyị siri chee. Mana ihe kacha adọrọ mmasị bụ na n’ọtụtụ ebe mmiri jụrụ oyi erughị kilomita abụọ n’ime omimi.
Gịnị ka nke a na-agwa anyị? Anyị kwesịrị imekwu nyocha na mpaghara Mars. Nchọpụta ndị a nwere ike iKpalie ọhụụ ọhụrụ na saịtị South South na Mars. Rover na South Pole nke Mars nwere ike inyere anyị aka ịghọta nke ọma omume mmiri na mpaghara ahụ na uru ọ bara ụmụ mmadụ n'ọdịnihu.
Nyocha banyere mmiri na Mars
Taa, Mars bụ ọzara oyi kpọnwụrụ. Ma, ọdọ mmiri na ala mmiri na-egosi na n’oge gara aga, mmiri na-asọ n’elu mbara ụwa a na-acha ọbara ọbara. Ruo ọtụtụ iri afọ, ndị ọkà mmụta sayensị na-anwa ịchọta ebe mmiri dị na Mars, na-enwe olileanya ịghọta otú ụwa uhie si ghọọ ala akọrọ, ebe onye agbata obi ya, bụ ,wa, chekwaa mmiri mmiri wee bụrụ paradaịs na-adịghị agbanwe agbanwe.
Ugbu a, site na iwebata ihe nlere nke mbara ala a n'ime ụdị ọhụụ, otu ndị ọkà mmụta banyere ala na ndị ọkà mmụta banyere mbara igwe emepụtala foto ọhụrụ nke oge gara aga nke Mars: ọtụtụ mmiri dị na mbara ala a nwere ike ịdaba na ụwa.
Nnyocha ndị e mere na mbụ egosiwo na mgbe radieshon nke anyanwụ na-adọta mmiri na Mars site na mbara igwe, ọtụtụ mmiri na Mars na-agbaba na mbara igwe. Ma nchọpụta ọhụrụ a kwubiri na mmiri dị na Mars ataala ahụhụ ma ikuku mmiri ma njide. Dabere na mmiri nke mmiri ọ na-amalite, ụdị ọhụụ a na-eme atụmatụ na n'etiti 30% na 99% ejikọtara na mineral site na eriri ụwaebe ndị nke ọzọ gbabara na mbara igwe. Nke a bụ dịgasị iche iche ma nwee ike ịgụnye usoro abụọ, yabụ eziokwu dị n'ime oke a.
Ọ bụrụ na ụdị ọhụrụ ahụ ziri ezi, a ga-edegharị akụkọ banyere oge uto nke ụwa. Ekwenyere na mmiri niile tọrọ atọ na ala Mars taa pụtara na mgbe ọ dị obere, enwere mmiri karịa n'elu Mars karịa ụdị ndị e mere atụmatụ na mbụ, na oge ochie nwere ike ịba uru karịa ka amara. nke microbial ndụ. Ọnọdụ ikuku dị na Mars na-egbochi ọnụnọ mmiri mmiri n’elu mbara ụwa uhie. Ma mmiri nwere ike ịnọgide na-mmiri mmiri n'okpuruala.
Enwere ihe akaebe na enwere mmiri nnu na Mars, mmiri a bụ ihe kpatara ọnụọgụ ahịrị a na-ahụ na mkpọda ugwu n'oge oge kacha ekpo ọkụ na Mars. Ihe bụ ihe ọzọ, mmiri mmiri dị n’elu ala na-enye ebe dabara adaba maka ndụ na mbara ụwa a. Nsonaazụ ahụ gosipụtara ihe akaebe nke nnu nnu n'ime ebe anọ dị iche iche. Ya mere, ihe a na-akpọ gịrịgịrị linear trenchi, nke bụ ihe dị ka mita 5 n’obosara ma mụọ ihe kemgbe ọtụtụ afọ, bụ ọrụ mmiri nnu.
Osimiri dị omimi na-apụta n'oge ọkọchị Martian ọ bụla, na-eyi ka ọ na-agbada na mkpọda ugwu nke ugwu ndịda. Mgbe oyi na-atụ, mmiri ndị a ma ọ bụ olulu ndị a anaghị akwụsị akwụsị. Eziokwu ahụ na data ugbu a na-egosi na etinyereghị ajị agba ndị a n'afọ niile na-egosi na mmiri mmiri na-agbada n'ugwu na mkpọda n'ihi ụba okpomọkụ. Mgbe oge oyi na-abịa ha na-apụ n'anya.
Site na data spectrometric sitere na CRISM, otu ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Institutelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà na Georgiazụ nke Georgia (USA) kwadoro na ọnụnọ nke nnu dị ọcha dị ka perchlorates na chlorates, nke bara ụba na mbara ala a (ihe ruru 10.000 ugboro karịa ụwa). Gịnị mezie belata ebe mmiri na-agba mmiri si 0ºC ruo -70ºC, ọnọdụ nke enwere ike ịchọta mmiri mmiri mmiri.
Ọnọdụ maka ndụ
Ọbụna na ihe niile achọpụtara, elu nke ụwa uhie nwere ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị nnọọ njọ na ndụ. Karịsịa, a na-edozi ọnọdụ ndị a site na ọnụọgụ nke ụzarị ultraviolet nke sitere na anyanwụ. Agbanyeghị, data ndị a maka ịdị adị nke mmiri mmiri mmiri na mpaghara dị n'okpuru ala na-eme ka ebe obibi dị mma karịa n'okpuru ọchịchị Martian, nke bụ ebe a ga-etinyekwu mgbalị ịchọ ndụ n'ọdịnihu.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmiri dị na Mars na ihe niile mara banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mmiri dị na mmiri
Gịnị bụ mmiri